Nezvedu - Danyang NQ Sports Uye Fitness Co., Ltd.
Danyang NQ Sports uye Fitness Co., Ltd. inotarisisa kugadzira zvigadzirwa zve latex zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvemuviri. With anopfuura 10years kugadzirwa ruzivo muindasitiri yedu. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira latex resistance loop band uye yoga band, latex tubing expander nezvimwe tinogona kuita zvigadzirwa zvakagadzirwa maererano nechikumbiro. MISSIONTinoteerera zvakanyanya kune mhando yechigadzirwa uye "Hupenyu hupenyu hwefekitori yedu". Isa yakanakisa pre-musika, yepakati & mushure mekutengesa sevhisi seinjini yekukura kwemari, Ipa purofiti uye kukwikwidza faida kune vatengi. Isu tinogara tichikura nevatengi pamwe chete. CHIRATIDZO Kuva mutungamiri anozivikanwa muyoga uye kugwinya zvigadzirwa mugadziri uye ekisipota mune ramangwana makore 3-5. Isu tinozadzisa izvi nekupa simba kuvashandi kuti vave ivo vakanyanya kugona uye nekukurudzira zvinobudirira zvikwata zvine mutsindo. HUNOKOSHA Chigadzirwa chigadzirwa kutangaVatengi vanotanga Kufunga nezveSevhisi Yechikwata basa Passion yeRunako Kuzvipira Kunharaunda.
Danyang NQ Sports uye Fitness Co., Ltd.
Bhizinesi chiyero: R & D uye kugadzirwa kwemidziyo yekusimbisa uye zvekushandisa, zvekumisikidza midziyo uye nezvimwe.
Latex Kunetseka Bhandi
Kutarisira ramangwana, tichagara kutevera zvebhizimisi mweya "unhu kutanga, kuvimbika vachikanda zvebhizimisi, kutsungirira, kugona" kupa vatengi vedu yepamusoro uye zvimwe zvigadzirwa zvemberi. Kuzadzisa zvido zvemitambo yedu yemitambo uye nekupa mipiro mikuru kunhandare yemitambo yenyika. Tiine chigadzirwa chemhando yepamusoro, nemoyo wese uye nenguva basa zano, kutendeseka uye kuvimbika bhizinesi mhando uye hunyanzvi hunhu, isu takunda kuvimba nekurumbidza kwevatengi vedu. Kuita kwedu uye kutsigira uye kukurudzira vatengi vedu kuti vavake iyo mitambo chikonzero pamwe padivi nekusingaperi. Tichazvipira kushuvira kwedu kune zvemitambo chikonzero uye nekugadzira iro ramangwana pamwechete newe.
Kambani yedu inozivikanwa mukugadzira uye kugadzirisa zvigadzirwa senge thruster, grip, kugwinya michina, latex tension bhandi, latex mhete, latex chubhu, nezvimwewo, ine yakakwana uye yesainzi mhando manejimendi system.